Suubbis, Author at Suubbis Blog
Waxyaabaha lagaa rabo inaad ugu dadaashid websitekaaga
In bogg laga sameeyo internetka waa mid leh xamaasad, sidoo kale waa howl walwal uu lasocdo maadaam aad summadaada usameyneysid sawir iyo xog keydin online ah. Sida loo arko summaddaada/ganacsigaaga waxey ku xiran tahay sida loo qaato ama loo daalacdo xogta aad …
16 Qodob oo muhiim ah in sax lasaaro inta aadan bilaabin ganacsi
Ma waxaad u baahan tahay inaad aasaastid ganacsi? Hambalyo! Waxaad kasoo gudubtay tillaabada koowaad ee fikir abuurmidda. Waxaad soo gaartay xilligi aad diyaarin laheyd qaababki aad ku aas aasi laheyd ganacsi laakin marka hore waxaan ku leeyahay waxaa soo badanayaa dadka doonaya …
Waa maxay SEO, siduusa u dhisaa guusha Online-ka Ah?
SEO waxaa laga soo gaabiyay Search Engine Optimization, waa hab farsamo oo la isticmaalo si loo beegsado, laguna soo jiito dhaqdhaqaaq badan boggaaga/website kaaga si dabiici ah. Guusha laga gaaro internetka ma ahan mid si degdeg ah loo gaaro, waa mid u …
5 sababood oo aad ugu baahan tahay inaad si degdeg ah u qabsatid domainka dotSo.
Domain waxaa loo yaqaanaa magaca si gaar ah loo xukumo oo internetka lagu isticmaalo. Magacaaga ama domainkaaga waa aqoonsi adiga kuu gaar ah. Shakhsi kasta, ganacsi kasta ama urur kasta oo u baahan iney yeeshaan kasoo muuqasho internetka ah, waxey u baahan …
Waxaad wax ka oganeysa suuq-galka dijital ah ee ganacsiga iyo sidoo kale CMO. Waxaad maqashay qof sheegshegayo “suuq-geynta suuq-geynta” waxaana laga yabaa intaad horay fikradda ugu heysatay balse wax badan kama ogid. Waxaane laga yaabaa in aad ka xishooneyso in aad cid …
Abuuritaanka iyo hirgelinta xayeysiis yada baraha bulshada waa qeyb muhiim ah oo ka jawaabeysa wax maamulka maareynta warbaahinta. Inkastoo ay jirto shaqo badan oo aad sameyn kartid si aad ula xariirtid hogaamiyaashaada adoo adeegsanaya wax qabadka dabiiciga ah, xayaysiinta warbaahinta bulshada ayaa …
Maamulka baraha bulshada waa abuurista iyo Soo Dhajinta Macluumaadka kusabsan Mawduucyada baraha Bulshada Qayb weyn oo ka mid ah maareynta warbaahinta bulshada(social media management) ayaa abuuraya oo bahinayo waxyaabaha miidhiyaha ah ee warbaahinta guud ee shirkadahaaga. Tani waxay ku lug leedahay ma …
Horumarinta istaraatejiyadda baraha bulshada waa qayb muhiim ah oo hubinaysa in mid kasta oo ka mid ah ololehaagu kaa caawinayo inaad u dhawaato inaad la kulanto ujeedooyinka suuqgeynta. Ka dib markaad go’aansatid kanaalada aad qorsheyneyso inaad isticmaasho, waxaad u baahan doontaa inaad …
Suuq-geynta dijitaalka ah wuxuu ka kooban yahay qaybo badan oo Qalab ah oo wada shaqeynaya si loo abuuro xiisaha, korriinshaha, iyo iibsashada dhow ee ganacsiga. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in aad ogtahay ka bixitaanka xeeladeynta suuq-geynta iyo sida ay …
Ma haysataa qorshaha ganacsiga?
Qorshaha ganacsiga waa qalab muhiim u ah ganacsatada. Qorshaha Ganacsiga ma ahan oo kaliya inuu ka caawiyo Ganacsatada oo aay xoogga saaraan talaabooyinka gaarka ah ee lagama maarmaanka u ah inay u yeeshaan fikradaha ganacsiga inay guuleystaan, laakiin sidoo kale waxay ka …